Junior Marketing | A-G-T Company Limited ﻿
4.8.2020, အချိန်ပြည့် , Distribution / Logistic
ကုမ္ပဏီ: A-G-T Company Limited
Our Company is Electronic Home appliance & Mobile phone Distribution Company. It was established in 1985. Our company distributedalot of electronic product such as electronic home appliances, Karaoke set, computer accessories, CCTV, Hoseki Clock, 24 hour Clock, Time2U watch and own brand (AGT,E2 ) phone & mobile accessories.
•	ပစ္စည်းမ်ားကို စနစ္တက် ထိန်းသိမ်းနိုင်ရမည်။
•	ဂိုဒေါင္လုပ်ငန်းအေတြ့အကြုံရွိသူ ဦးစားပေးမည်။
•	မန္တလေးမြို့နယ်အတြင်း နေထိုင်သူဦးစားပေးမည်။
•	အသင်းအဖြျဲ့ဖင့် ပူးပေါင်းဆောင်ြရက္နိုင်သျူဖစ်ရမည်။
•	Minimum Qualification: Bachelor
•	Experience Level: Entry level
•	Experience Length: 1 year
ကျွန်တော်တို.ကမ်းလှမ်းသည် •	Female.
အလုပ်တည်နေရာ Shwe Yin Mar Street,Yankin Township, Yangon.
Company Industry: Distribution/Logistic
A-G-T Company Limited
231 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Distribution / Logistic
o	Any graduate o	Age between (25-35) o	Adobe Illustrator, Coral Draw, Adobe Photoshop ပိုငျးမြားကြှမျးကငျြစှာ အသုံးပွုနိုငျရမညျ။ o	Pamphlet design၊ ကွျောငွာ design မြားအသုံးပွုနိုငျရမညျ။ o	Computer (MS Word, Excel, Internet, Email & Outlook) အသုံးပွုနိုငျရမညျ။ o	Good Communication and Negotiation skills o	At least2years experience in related field
အမျိုးအစားအလိုက် အလုပ်ကြော်ငြာများ Arts, Crafts, and Design
အမျိုးအစားအလိုက် အလုပ်ကြော်ငြာများ Arts, Crafts, and Design နှင့် နေရာဒေသရှိ Yangon (Rangoon)
•	အရောင်းလမ်းကြောင်းအတွက် စီစဉ်ပေးခြင်း။ •	Customer များ၏ အဆင်မပြေမှုများကို တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးရန်။ •	Wayplan အတိုင်းရောက်/မရောက် Outletများသို့ဖုန်းဆက်ပြီး Market Waychat ပြုလုပ်ရန်။ •	CRMများ အနေဖြင့် Phone Route Check များအား နေ့စ� ...
•	Supporting the Manager in day to day marketing activities •	Helping to organize market research (B2B, B2G) •	Prospect new clients direct email, calls and networking events •	Maintaining accurate record and follow us
259 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Distribution / Logistic
•	ပစ္စည်းမ်ားကို စနစ္တက် ထိန်းသိမ်းနိုင်ရမည်။ •	ဂိုဒေါင္လုပ်ငန်းအေတြ့အကြုံရွိသူ ဦးစားပေးမည်။ •	မန္တလေးမြို့နယ်အတြင်း နေထိုင်သူဦးစားပေးမည်။ •	အသင်းအဖြျဲ့ဖင့် ပူးပေါင်းဆောင်ြရက္နိုင်သျူဖစ်ရမည်။
•	ပစ္စည်းများကို စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းနိုင်ရမည်။ •	ဂိုဒေါင်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ ဦးစားပေးမည်။ •	မန္တလေးမြို့နယ်အတွင်း နေထိုင်သူဦးစားပေးမည်။ •	အသင်းအဖွဲ့ဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	Leading to all Department (For AGT and Than Su San construction) •	Maintain (company image), good culture, other goods activities •	Planning, consulting to top management level/ supervise & provide strategic utilization •	Implementing/ embody (Disciplines/ JD/ SOP) personal data collection •	Evaluating employee relation & industrial relation (Counseling, Compensation, Benefits, Safety, Performance, Staffing Level, Defining & designing work) ...
Senior HR Staff
•	ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် သက်ဆိုင်သောဘွဲ့များ ဦးစားပေးမည်။ •	Computer (Microsoft Word, Excel, Internet, E-mail, Outlook) အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ •	HRနှင့်ပတ်သက်သော Diploma (သို့) Certificate တစ်ခုခုရှိရမည်။ •	သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်� ...
•	Coordinate within the company and Group and prepare Budgets •	Ensure generation of reliable financial statements of the company, including the Balance Sheet, Income Statement and Cash Flow Statement, among others •	Overall Manage on Company's internal cash flow with daily Income and Expenditure. •	Review each individual company’s accounting books and records to ensure they have been accurately prepared in compliance to accounting standards and group company policy •	Monitor and analyze Financial Performance through monthly fin ...
Make entry for all companies daily MIT accounting software transaction receipt/ payments transactions by basic from cashier cash book • Checked for all account code by income & expenditure (MIT Accounting Software) • Daily checked for bank transaction by account code (MIT Accounting Software) • Daily entry by MIT Accounting software by checked of general ledger balance • If HR leader want to seem all transaction, make its • Overview report for General Overhead Expense • Overview report for Daily Income re ...
•	အရောင်းစီမံချက်အား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း။ •	ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။ •	သတင်းအချက်အလက်များ စုဆောင်းတင်ပြခြင်း။ •	New Outlet များရှာဖွေခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း။ •	မော်တော်ယာဉ်အား ထိန်းသိမ်းေ� ...
•	Build and implement the overall digital marketing strategy •	Manage the rest of the team •	Plan digital marketing campaigns including web, email, social media and display advertising •	Measure and report on the performance of all digital marketing campaigns •	Regularly measure, analyse and report performance of all digital marketing campaigns and against goals (ROI and KPI) •	Demonstrates an understanding of all element of digital strategy, how they interrelate and how they contribute to reaching strategic objectives
260 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Distribution / Logistic
•	Electrical & Plumbing Installation •	Electrical Work including repairing and troubleshooting •	Responsible for fixing electrical related problems •	Records and reports all faults, deficiencies, and other unusual occurrences regularly •	Be available for emergency service •	Inspect completed installations and observe operations, to ensure conformance to design and equipment specifications and compliance with operational and safety standards •	Plan and implement Standard Operating Procedure by applying principles of elect ...
အမျိုးအစားအလိုက် အလုပ်ကြော်ငြာများ Engineering & Technical jobs နှင့် နေရာဒေသရှိ Yangon (Rangoon)
•	Controlling and managing information system for Branches and Head Office weekly report to MD. •	Communication and discussing related to software with Vendors. •	Calculating and preparation the budgets for IT Department. •	Planning training schedule and liasing with other department. •	Responsible for IT infrastructure and Server Configuration, installation, Maintain and troubleshooting. •	Liaising and discussing about accounting flow such as ledger process, trial balance, P&L reports as according to Account Department wit ...
•	Hand Phone Software ပွုပွငျရနျ။ •	KTV သီခငျြးဖွတျပေးရနျ။ •	ပစ်စညျးအသဈဝငျလာလြှငျ Software ပိုငျးစမျးပေးရနျ။
Junior Goods Exchange
•	အလဲအဝင်အထွက်စာရင်းပြုစုခြင်း။ •	ပြန်ပေးစာရင်းသွင်းခြင်း။ •	အပျက်ပြင်ချပေးသောအလုံးရေနာမည်နှင့်တကွ စာရင်းသွင်းရခြင်း။ •	Sparepartများလိုပါက sparepart စာရင်းကိုင်သူထံမှတောင်းခြင်း။ •	အပျက်ပြင်ရန်ပစ္စည်းမျ ...
•	ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။ •	ယာဉ်မောင်းအတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။ •	လိုင်စင်အနက်(သို့) အညို (သို့) အနီ ကိုင်ဆောင်ထားသူ ဖြစ်ရမည်။ •	ရန်ကုန်မြို့တွင်းကျွမ်းကျင်စွာ မောင်းနိုင်ရမည်။ •	အသောက� ...
261 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Distribution / Logistic
•	ဘွဲ့ရ၊ LCCI Level I,II အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ •	ငွေစာရင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းများ စစ်ဆေးခြင်း လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၁)နှစ်နှင့် အထက်ရှိရမည်။ •	Computerized ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ •	အကျင့်စာရိတ� ...
•	Preparing the yearly audit and financial reports for the holding company and group of companies •	Conducting risk assessment of the company’s assigned functional area in established/ required timeline •	Reviewing the suitability of internal control design •	Collating, checking and analyzing spreadsheet data •	Ensuring that assets are safeguarded •	Other duties Assignment by Top Management
Sales Engineer (Supervisor)
•	B.E (Electrical) ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ •	လျှပ်စစ်မီးပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ •	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး(၂)နှစ်ရှိ ရမည်။ •	အသင်းအဖွဲ့ဖြင့် လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ နယ်ထွက်နိုင်ရမည်။
•	ဗီဇာလျှောက်ထားခြင်း၊ ကားလက်မှတ်၊ လေယဉ်လက်မှတ် ဝယ်ခြင်း •	ရုံးတွင်းစာများ၊ စာချုပ်များစာစီစာရိုက်ခြင်း •	လုပ်ငန်းသုံးဖုန်းဘေလ်များထုတ်ပေးခြင်း •	စီမံဌာနနှင့်ဆက်စပ်သော စာရွက်စာတမ်းများထိန်းသ ...
• To find new customers by weekly/monthly. • To collect sales order from current customers and new outlet. • All sales activities. • Making presentations to promote new products. • Keeping in contact with customers before and afterasale. • To collect other competitor information. • To work under pressure and meet target.
Junior Marketing Sales & Marketing Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon A-G-T Company Limited Sales & Marketing Jobs Sales & Marketing Jobs Distribution/Logistic မြန်မာနိုင်ငံရှိ အလုပ်များ၊ ရန်ကုန်ရှိအလုပ်များ
Looking for job in Kyauktaw Apply online at www.jobless.com.mm directly to thousands employers.
Search best job in Htantabin at www.jobless.com.mm. Exclusive job portal in Myanmar. Apply online today!
Find the best jobs in Kyaikkami at www.jobless.com.mm. Apply online and get job in Kyaikkami today. Our job specialist will help you to find dream job vacancy in Kyaikkami
Work in ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(904)
Work in ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(87)
GPS Data Entry (IT/Logistic Department)
Security M (12)
Yangon (Rangoon) 129 နေ့များ
Yangon (Rangoon) 177 နေ့များ
Yangon (Rangoon) 231 နေ့များ
Yangon (Rangoon) 266 နေ့များ
Yangon (Rangoon) 279 နေ့များ
Yangon (Rangoon) 295 နေ့များ
Yangon (Rangoon) 298 နေ့များ
Yangon (Rangoon) 326 နေ့များ
Yangon (Rangoon) 358 နေ့များ
King BBQ - Bartender
Yangon (Rangoon) 393 နေ့များ
Brand Marketing (Baby/Lady products) (Code-41060)
Marketing Executive (F&B Distribution)
Junior Accountant (NFF)
Shan State6နေ့များ